Ogaden News Agency (ONA) – Tartanka jagadii Cabdi Iley uu baneeyay oo dadka shacabka ah lagu dhibaateynayo
Dhagaxbuur – Dad farabadan ayaa xabsiga loo taxaabay ilaa shalay magaalada Dhagaxbuur, dadkaa oo qaarkood la la’yahay meel loola kacay. Arintan ayaa waxay noo sheegeen dadkii aan ka wareysanay inuu ka dambeeyo Cabdulahi Itobiya oo ka mid ah 3ex nin ee ku tartamaya jagada uu banaynayo Cabdi iley.
Gumaysiga ayay dhaqanadiisa ka mid tahay in dadka uu jagada uu dhiibanayo isku muujiyaan cadaadiska ay saari karaan dadweynaha, sidaa daraadeed ayuu Cabdulahi Itobiya oo Cabdi iley uu u tababaray hawshan ka bilaabay Dhagaxbuur. Wararka aan goor-dhaweyd ka xaqiijinay qaar ka mid ah dadka dagan magaalada ayay noogu sheegeen inuu ku eedeeyey dadkan uu soo qabqabtay waxay u sharxayeen daweynaha wadahadalkii ka socday Nairobi iyo waxaa la ogaaday inay Internet-yada akhristaan.
Dadka ay na soo gaadheen magacyadooda waxaa ka mid ah; Cabdi xakin Indhayare, Asad Axmad Cawar, Caydarus Nur Aw-Macalin, Ina Biixi Mataan, maxamad A. Qaas.
Dadka shacabka ah ee dambi la’aanta lagu soo xidhayo waxaa ka masuul ah dawladda Itobiya, waxaana loo soo bandhigi doonaa goor aan fogayn caalamka filimo muujinaya dambiyada ka dhaca jeelasha Ogadenya oo dawladda Itobiya ay maamusho. Sidoo kale waxaa na soo gaadhay warbixino tafatiran oo ka hadlaya xabsiyada Ogadenya iyo lacagaha faraha badan ee dadweynaha lagaga qaadanyo madax-furashada iyo si loo soo daayo eheladooda.